यी ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छ असिमित धन, तपाईमा पनि छ कि ? – List Khabar
Home / रोचक / यी ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छ असिमित धन, तपाईमा पनि छ कि ?
यी ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छ असिमित धन, तपाईमा पनि छ कि ?
admin February 14, 2022 रोचक Leaveacomment 135 Views
काठमाडौँ । हाम्रो शरीरको विभिन्न स्थानमा दाग तथा कोठीहरु हुन्छन् । के ति कोठीहरुले कुनै शुभ वा अशुभ फल प्रदान गर्दछ ? यस सम्बन्धमा मसुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएको कोठी वा चिन्हका आधारमा व्यक्तिको भाग्य र भविष्य विश्लेषण गरिएको छ ।
दाहिने गालामा कोठी हुने मान्छे धनी हुन्छ । बायाँ गालामा कोठी हुने मान्छे खर्चालु हुन्छ । ओँठमा ‘को’ठी’ हु’ने ‘मा’न्छे’ ‘यौ’न’को ‘भो’को हु’न्छ र सधै से’क्स’कै विष’यमा सोँ’चिरहन्छ । कानमा कोठी हुनेको आयू छोटो हुन्छ । गर्धनमा कोठी हुने व्यक्ति अल्छी हुन्छ र खाली आराम गरिरहन चाहन्छ ।
दाहिनी पाखुरामा कोठी हुने व्यक्ति गन्यमान्य हुन्छ र समाजमा उच्च स्थान पाउँछ । बायाँ हातमा कोठी हुने व्यक्ति झगडालु हुन्छ । नाकमा कोठी हुने व्यक्ति फिरन्ते जस्तै हुन्छ र प्राय यात्रा गरिरहनुपर्छ । दायाँ छा’तिमा कोठी हुने पुरुषहरुले आफ्नी श्रीमतीलाई बहुतै प्रेम गर्छन् भने बायाँ छा’तिमा कोठी हुनेहरु स्वा’स्नीसँग झगडा गरिरहन्छन् ।
Previous झापाको दमकमा घटेकाे यस्ताे अनाैठाे घ-टना जसले प्रहरी लाई समेत चकित पार्याे !
Next होसियार ! ओमिक्रोनबाट निको भइसकेपछि पनि छालामा देखिन्छन् यी ४ खतरनाक लक्षण, तुरुन्तै उपचार गर्नुहोस्